'आमा सत्यः बुबा विश्वास' पश्चिमा विधर्मी मान्यता हो - hastalikhit.news
हस्तलिखित August 18, 2019 August 19, 2019
“मेरो त आमा पनि सत्यः बुबा पनि सत्य ! “
नेपाली र भारतीय दुइ चलचित्र उद्योगकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र प्रियंका कार्किले आफुभन्दा कम उमेरका जीवन साथी रोजेपछि केही चर्चा भए । चर्चा स्वभाविक थिए किनकी घटना अस्वभाविक थिए, कम्तिमा हाम्रो समाजका लागि । हाम्रै नेपाली समाज र म जन्मेको सुदूरपश्चिममै दुलही जेठी हुनु तिरस्कार मानिदैन तर मनोसमाजिक दृष्टिले यस्ता परिघटना सहजै स्वीकार्न पनि सक्दैन जुन पहिलेको वैदिक समाजले स्वीकार्न सक्थ्यो ।
अहिले इन्टरनेट र विश्वव्यापी पर्यटनको असरले सँस्कृतिहरुको आदानप्रदान मात्र भएको छैन तिब्र पश्चिमाकरण भएको छ जसलाई नेपालले आधुनीकिकरण भनेर गलत बुझीरहेको छ। हाम्रो दर्शन भन्छ ‘सबैको अस्तित्व यथावत स्वीकार’ उनीहरुको दर्शन भन्छ ‘सबैलाई एकनासको बनाउ’ । हामी उनीहरु जस्तै हुने पथमा छौँ ।
हामी पूर्वीय दर्शनमा सम्बन्धहरुलाइ उच्च महत्व र सम्मान दिएको पाउँछौँ । सम्बन्धहरु विश्वासमा जन्मिन्छन । यसमा रुपरंग, जात-धर्म, उमेर-वर्ग अर्थहिन हुन्छन । पछिल्लो समय देशमा र हाम्रो समाजमा ‘मानवता’ कृतिम हुँदै गएको छ । बलात्कार जस्ता मानवताविरोधी अपराधहरु बढ्दैछन । यसमा हामि मानिसहरुमा मानवताः प्रेमः समभाव र मुख्यत मानवीय चेतनाकै स्खलन कारण हुन । यीनको समाधान पनि यी समस्याका कारक भित्रै लुकेको हुन्छ ।
दुःख साथ भन्नुपर्छ बहस केहि ‘वेस्टर्न पिलरस’का हातमा छ । हामी जन्मले यहाँ भएपनि चेतना र शिक्षाले ‘वेस्टर्न एडुकेटेट’ हौँ र हामीलाइ उनीहरुले त्यसरी नै सिकाइरहेका छन जसरी उनिहरुले मुसलमानहरुलाइ ‘खुदाको रक्षा गर्न’ र कोरीयनहरुलाइ देश विभाजन गर्न ब्ल्याकमेल गरेका थिए ।
विश्वास के हो ? जे सत्य प्रमाणित हुन सकेको हुँदैन त्यो विश्वास हो । शुर्य पूर्वबाट उदाउँछ भनेर विश्वास गर्नुपर्दैन यो सत्य हो । विश्वास इश्वर स्वरुप छ कि निराकार छ भन्नेमा हुन्छ । विश्वास आआफ्नै हुन्छः सत्य एउटै हुन्छ । मेरो आमा सत्य हुन जसले जन्म दिइन । बुबा कसरी विश्वास हुन सक्छन जबकी बुबाको उपस्थीतिबीना जन्म असम्भव थियो । मेरो बुबा पनि सत्य हुन । खासगरी नागरिकता ऐनमा बहस हुँदा आमा सत्य र बुबा विश्वा भएको तर्क सुनीयो ।
प्रस्तावित नागरिकता ऐनमा केहि कमजोरि देखिन्छन । जस्तै कडा जाँचपछि आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिदाँ केहि बिग्रिदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । विदेशी आमा र विदेशी बुबाको नामबाट समान अवधी पछि समान आधारमा तिनको बच्चालाई वंशजको नागरिकता दिँदा फरक पर्दैन । तर हाम्रो खुल्ला सिमाको सुरक्षा चुनौति र भुराजनीति अवस्थालाइ नजरअन्दाज गर्नुहुन्न किनकी अहिले हाम्रो राज्यसत्ता र राज्यसंयन्त्र हाम्रै सार्वभौमिकतामा आइसकेको स्थिती हैन । अहिले हामी उल्लेखित प्रावधान राख्न सक्षम छौँ की छैनौँ भन्ने प्रश्नको पनि सँगै समाधान निकाल्नु पर्छ ।
हामीलाइ पटकपटक बहकाइएको छ । बहावको अन्तिम ठाँउको रुपमा पश्चिमा निरिह हावाले हामीलाइ विभाजन गरिदियोः द्वन्द्व रोपिदियो । अब हाम्रो परिवार संरचना र त्यसमा टेकेर राज्य तथा समाज संरचनामा हान्न चाहन्छ । सचेत रहौँ । मेरा लागि प्रेम सर्वमान्य होः सबैका लागि हो ।
यौन स्वतन्त्र हुनुपर्छः जुन व्यक्तिगत आकांक्षा र आपसी सहमतिमा आधारित हुन्छ । लिंग पुरुष होस या स्त्री त्यो शरीरको एक नगन्य भाग र मानसीकताको एक चोटा मात्र हो । लिंगको पृथकताले मानव न त उच्च हुन्छ न त निच हुन्छ । बरु लिंगको पृथकतालाइ स्वीकार्न र सम्मान गर्न नसक्ने जुन ‘पण्डित’हरु हाम्रो धर्ममा केहि समय थिएः त्यस्तै मानवीयताका धमिराहरुले हामीहरुलाइ फेरी आमा सत्यः बुबा विश्वास भन्ने भ्रम कथन सुनाएर विवाह र परिवार जस्ता आधारभुत र प्राकृतिक सँस्थाहरुलाइ अग्रमनका ‘बाधक’ भनेर सिकाइदैँछ ।
यो त्यतिकै खतरनाक छ जति हामिले आफ्नो चेतना र विवेक गुमाएर प्रेम बिर्सेका छौँः हिंसाको शासनमा पुगेका छौँ । बलात्कार त्यहि चेतनासुन्य कुकर्म हो । दुनीयामा सबैभन्दा बढी बलात्कार(बालबालिकाहरुमाथी) युरोप र कोरियन महाद्विपका चर्चहरुमा पादरीहरुबाट हुन्छ । हामि यत्र नार्यस्तु पुज्यन्तेः रमन्ते तत्र देवता भन्ने सँस्कारका मानिसले त्यो हदको चेतनामा झर्नु निर्लज्ज र मरेतुल्य हो । त्यस्ता कुकर्म नियन्त्रण गर्न राज्यनीति या कानुनले हैन न्याय र चेतनाले मात्र सक्छ । समाधान त्यै बाटोबाट खोजौँ । सम्हालिउँ । चेतना नगुमाउँ । प्रेमभाव लाइ विस्तार गरौँ । र संगसंगै लोकतन्त्रः जहाँ सबैको जिउने हक हुन्छ, दण्डको सजाय हुन्छ यसको रक्षा गरौँ । २०७५ भदौ १ गते
Tagged hastalikhit, hastalikhit nepal, Hastalikhit.news, हरीश प्रसाद भट्ट
बालुवाटार जग्गा प्रकरणः नक्कली तमसुक न्यायधीशले गरे सदर